Joint amadolo has nemisipha ezine ukuthi ukuxhuma ithambo shin kusukela fibula futhi kunawo wonke. Lokhu side ezimbili izintambo, futhi emuva phambili. Ngenxa yalokho yokuwa noma ezinye Ukuwohloka joint amadolo kungenzeka ikhefu eyodwa noma nemisipha eziningana.
ukudabuka umsipha ka kwedolo ngokuvamile kwenzeka ngenxa Imininingwane ngokweqile noma ukuphambukiswa shin. Uma kwenzeka sokuhoxisa okungazelelwe kungenzeka phandle drumsticks ezilimele umsipha kwangaphakathi uma kwezibilini, ngokulandelana, kukhona ingozi ukuphula lenqwaba yangaphandle. nemisipha Lateral zilimele ngokuvamile ngaphansi kwengcindezi enzima ngaphandle, isb ngesikhathi umthelela tibia. Noma yiziphi izikhala libhekene sebuhlungwini obunzima, kodwa ukuhamba ngokuhlanganyela akunzima. Kodwa kukhona kungenzeka ukuthi sikhukhumale kwedolo. Ngemva uhlukunyezwe kwedolo bangase babe nomuzwa ubuhlungu lapho egijima ngisho ukuhamba. Iphinde singenzeka emva inqubo accretion nemisipha. Kukhona amacala lapho umsipha ezilimele ngemva ukulimala eziningana ezalandela osemanzi nje.
Uma kwenzeka yokulimala, umuntu kumele anikeze usizo lokuqala. Izenzo kumelwe zenzeke ngokuvumelana nalesi simiso: ukuphumula, iqhwa, ukulungisa, ephakamisa. Uma isikhathi ukusebenzisa ice ngokushesha futhi ngokuhlanganyela cool, ukuvuvukala kanye soreness ziyancipha kakhulu ngeke abukhali.
Lokho uyaphenduka ukuphumula, idolo olimele kumele kube ngokuphelele lapho esephumule cishe izinsuku ezimbili emva ukudabuka, ngaleyo ndlela ungakwazi ukuvimbela umonakalo.
Selehlile esebenzisa iphakethe ngokuhlanganyela, egcwele iqhwa. Uma kungenjalo, ungase usebenzise okunye. Singasho simisiwe imifino noma inyama. Ukuvimbela frostbite wobulawa phakathi isikhumba kanye ucezu ice noma zihambisana indwangu esitsheni ke ngeqhwa, kuphela ke singasebenza kwedolo. nokusebenzisa isikhathi - njalo ngehora imizuzu cishe abangamashumi amabili. isikhathi Ubude akufanele kube isikhathi esingaphezu kwamahora amathathu. Le ndlela ukunciphisa ubuhlungu nokuvuvuka kuyoba efanele kuphela ngemuva kosuku ukulimala.
nemisipha Torn - kungcono yokulimala yokuthi sidzinga kokungathembeki. Joint kumele kuvikelwe i ngebhandeshi nokunwebeka. Strapping Kwakumelwe uqine ngokwanele, kodwa ngaphandle Kinks. Uma kungenjalo, ukuze kwehlele ukuhlukumeza kwegazi ukugeleza nezicubu necrosis kuzokwenzeka.
Uma bedrest nge ngokulimala okudalwe ukudabuka we nemisipha amadolo, kubalulekile ukuthi siphakamise foot ngenhla inhliziyo ezingeni, uma kungenzeka. Ngenxa yale njongo, ngaphansi umlenze olimele is okuvalelwe imicamelo ambalwa. Isikhundla kweqiniso uma isiguli amanga. Uma uhlala, unyawo zingafakwa esitulwini. Kulesi isikhundla ephakanyiswe umlenze ezilimele kufanele kube ezinsukwini ezimbalwa, okungenani.
Ukuze nithole ngokugcwele indlela ezilimele amadolo umsipha ukudabuka noma nje dislocated futhi elimala, udinga luhlolo kadokotela. Uchwepheshe uhlola amadolo ngoba usayizi isimila, njengoba izinga yayo kuyanda kanye degree of ubufakazi ngqo kahle ukungathí sina kwaleso ukulimala. Futhi palpation ubuhlungu kwenzeka ngesikhathi checkout. Ngaphezu kwalokho, udokotela ehamba kwamadolo kancane eceleni. Kubalulekile ukugcina isimo ngamadolo qondanisa, kungabikho umuzwa Looseness noma ukuntengantenga. kokutshelwa ngokukhubazeka kwengane kungaba nzima ngenxa ubuhlungu obunzima. Kulokhu, lo imbande amadolo inikezwa analgesic nokuziphatha kabusha luhlolo kwezinsuku ezimbalwa. Uma kukhona izinsolo ukuthi ilimele ithambo izicubu, onguchwepheshe angabeka X-ray.
Umsipha ukudabuka we amadolo zidinga ukwelashwa. Into kuphela ezingakusiza - futhi ukunqunywa egqoke amabhandeshi ezonikeza baxhashazwe ngokuhlanganyela nokuzinza. Uma ukulimala kuyisono esibi nakakhulu, ngoba ambalwa nalokuvalelwa ibhasi. Le divayisi akuvimbeli Ehlala noma eguqa ngamadolo, kodwa akubi lithukululeni bacondze etindzaweni letehlukene.
Uma usulungise igebe emisipheni amadolo, ukuhlinzwa kuyadingeka. Ngemva kwamasonto ambalwa ukungabi khona asebenzayo motor umsebenzi kungenziwa Kunconywa ukuvivinya umzimba, kodwa into esemqoka lapha - isiqiniseko ngokuphelele ukuthi nemisipha tho abuyiselwe ngokuphelele nokuzinza ngokuhlanganyela.
Lapho uvuka, amehlo amnyama. Kusho ukuthini lokhu?
Ilokhu enkeneneza ezindlebeni zakho? Lokhu tinnitus yesikhashana noma imizwa?
Gqoka "phezulu abamhlophe, abansundu phansi". ingubo Office